कसरी थाहा पाउने कि मलाई फेसबुकमा ब्लक गरिएको छ: सबै तरिकाहरू | ग्याजेट समाचार
यदि तपाईंसँग फेसबुक खाता छ भने, तपाईंलाई शायद त्यो थाँहा हुन्छ सामाजिक नेटवर्कले प्रयोगकर्ताहरूलाई अरूलाई ब्लक गर्ने क्षमता दिन्छ। यसको मतलव तपाईसँग छ ब्लक गर्न विभिन्न तरिकाहरू सामाजिक नेटवर्कमा अर्को व्यक्तिलाई। यद्यपि यो पनि मानिन्छ कि अन्य व्यक्तिहरु को लागी तपाइँ को लागी केहि समय मा ब्लक गर्न को लागी सक्षम हुनेछ।
जब कसैले तपाइँलाई फेसबुकमा रोक्दछ, तपाईं यसको बारेमा कुनै सन्देश वा सूचना प्राप्त गर्नुहुन्न। तसर्थ, यो त्यस्तो चीज होईन जुन पहिले ज्ञात हुन्छ। तर त्यहाँ धेरै तरीकाले जान्न सकिन्छ कि यदि कसैले तपाईंलाई सामाजिक नेटवर्कमा ब्लक गरेको छ भने। ती सबै जाँच गर्न धेरै सजिलो छ।
1 के कसैलाई फेसबुक मा रोकिरहेको छ?
2 यदि म तपाईंको सम्पर्कहरू बीचमा थिएँ
3 यदि यो तपाईंको सम्पर्कहरू बीचमा हुनुहुन्न
4 गुगललाई चेकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
के कसैलाई फेसबुक मा रोकिरहेको छ?
फेसबुकमा व्यक्तिलाई रोक्ने कार्यको मतलब भनेको व्यक्तिले तपाईंलाई सामाजिक नेटवर्कमा देख्न सक्नेछैन। तसर्थ, यदि कसैले तपाईंलाई रोक्छ भने, तपाईं त्यो व्यक्तिलाई देख्न सक्नुहुन्न। यसको मतलब त्यो व्यक्तिको प्रोफाइल देख्न सकिदैन सामाजिक नेटवर्कमा। तपाईं टिप्पणीहरू पनि देख्न सक्नुहुन्न जुन यस व्यक्तिले केही पृष्ठहरू वा अन्य व्यक्तिको प्रोफाइलहरूमा छोड्दछ।
यसका अतिरिक्त, यो व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न यो पनि सम्भव छैन।लाई कुनै पनि निजी सन्देशहरू कुनै पनि समयमा पठाउन सकिदैन। थप रूपमा, यदि एक व्यक्तिले तपाईंलाई फेसबुकमा ब्लक गरेको छ भने, यसको मतलब यो व्यक्ति यो पनि तपाईंको प्रोफाइल हेर्न सक्षम हुनुहुने छैन। त्यसोभए तपाईले सामाजिक नेटवर्क प्रयोग गर्दा उसलाई तपाईलाई केहि पनि थाहा हुँदैन। यी परिणामहरू हुन् कसैले सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंलाई ब्लक गर्यो।
कसरी थाहा पाउने यदि कसैले सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंलाई ब्लक गरेको छ भने? त्यहाँ जाँच गर्न धेरै तरिकाहरू छन्।
यदि म तपाईंको सम्पर्कहरू बीचमा थिएँ
कुनैले तपाईंलाई ब्लक गरेको छ कि छैन भनेर जाँच्नको सबैभन्दा सरल तरिकाहरू मध्ये एक फेसबुकमा यस व्यक्तिको प्रोफाइल खोजी गर्नु हो। यदि त्यो व्यक्ति सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको साथीहरू बीचमा थियो भने, त्यसो भए यो सजिलो हुन्छ। केवल तपाईंको आफ्नै प्रोफाइल र मित्रहरूको सूची प्रविष्ट गर्नुहोस्। सम्भवतः जाऊँ कि अब यो तपाइँको साथीहरु बीच बाहिर जान्छ। यसको मतलब स्वचालित रूपमा यो व्यक्तिले तपाईंलाई ब्लक गरेको मतलब गर्दैन। यस्तो हुन सक्छ कि उसले सामाजिक खातामा उसले आफ्नो खाता मेटाएको छ वा उसले तपाईंलाई आफ्नो साथीहरूबाट हटायो। तर यो श already्कास्पद हुन सक्ने कुरा पहिले नै हो, यदि यो हाम्रा साथीहरू माझ छैन भने।
यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईंको प्रोफाइल प्रविष्ट गर्न प्रयास गर्नु हो। तपाईं कसरी पर्खालमा प्रवेश गर्न सम्भव छैन भनेर हेर्न लाग्नुभएको छ, तपाईं सायद एक सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन भन्छ कि यो सामग्री उपलब्ध छैन। यदि यो व्यक्तिले तपाईंलाई उनीहरूको सम्पर्कहरूबाट मात्र मेटाउदछ, वास्तवमा तपाईंलाई रोक्न बिना, तपाईं कुनै समस्या बिना तिनीहरूको प्रोफाइल हेर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। पनी सामाजिक नेटवर्कमा तपाइँको साथी हुन अनुरोध गर्न पनि सक्षम हुनु।
तर यदि जब तपाईं प्रोफाइल पहुँच गर्न को लागी हेर्नुहोस् तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्न, यो स्पष्ट संकेत हो कि यस व्यक्तिले तपाईंलाई फेसबुकमा ब्लक गरेको छ। यदि प्रोफाइल को एक विशिष्ट URL छ, किनकि तिनीहरूको सामाजिक नेटवर्कमा धेरै प्रोफाइलहरू छन्। तपाईं यसलाई प्रविष्ट गर्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि प्रभाव उस्तै हुनेछ, कि तपाईंले सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन भन्छ कि यो सामग्री उपलब्ध छैन। त्यसोभए के हुँदैछ तपाईंलाई थाहा छ।
अर्कोतर्फ, यस सम्बन्धमा अन्तिम जाँच गर्न सकिन्छ। यदि यो त्यस्तो व्यक्ति हो जुन तपाईंको सम्पर्कहरू मध्ये एक हो भने, तपाईंले सम्भवतः उनीसँग सन्देश पठाउनु भएको थियो कुनै समयमा। त्यसपछि फेसबुक भित्र मेसेन्जर खोल्नुहोस् र कुराकानीको लागि खोजी गर्नुहोस्। त्यसोभए तपाईं देख्नुहुनेछ कि यदि तपाईं नयाँ सन्देश लेख्न प्रयास गर्नु भयो भने त्यसो गर्न सम्भव छैन। वास्तवमा कुराकानीमा तपाईले अब आफ्नो प्रोफाइल तस्वीर हेर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईं देख्नुहुनेछ कि तपाईं एक फेसबुक प्रयोगकर्ता र कुनै प्रोफाइल फोटो प्राप्त। यो स्पष्ट संकेत हो कि तपाईंलाई सामाजिक नेटवर्कमा ब्लक गरिएको छ।
यदि यो तपाईंको सम्पर्कहरू बीचमा हुनुहुन्न
यो सम्भव छ कि तपाईंको सम्पर्कमा नरहेको व्यक्तिले तपाईंलाई ब्लक गरेको हो। यो हुनसक्छ तपाईलाई चिन्ने कोही हुन सक्छ, तर सामाजिक नेटवर्कमा तपाईका सम्पर्कहरू बीचमा हुनुहुन्न। जो कोहीले तपाइँलाई सामाजिक नेटवर्कमा रोक्न सक्दछ। किनकि यो तपाईंको सम्पर्कमा थिएन, तपाईंले आफ्नो सम्पर्क सूचीमा केहि देख्नुहुनेछैन, नता तपाईंको सन्देशहरूमा (सन्देशमा यस व्यक्तिको साथ तपाईंको सम्पर्क कहिले पनि भएन)। तर अर्को तरिका पनि छ।
देखि तपाईं यस व्यक्तिको प्रोफाइल फेसबुकमा खोज्न सक्नुहुनेछ। केवल खोजी ईन्जिनमा यसको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र परिणामहरू हेर्नुहोस्। सामान्य कुरा यो हो कि यो व्यक्ति खोजीमा बाहिर जान्छ। तर यदि तपाईंलाई ब्लक गरिएको छ, यो कुनै पनि समयमा यो बाहिर आउँदैन। त्यसोभए तपाईं तिनीहरूको प्रोफाईल हेर्न सक्नुहुनेछैन, न त यसमा रहेको सामग्री।
अघिल्लो केसमा जस्तै, यदि यस व्यक्तिको प्रोफाईलले यूआरएल प्रयोग गर्‍यो भने, सामाजिक नेटवर्कमा भनिएको यूआरएलको लागि खोजी गर्न सम्भव छ। त्यसकारण, यूआरएल बारमा प्रोफाइलको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस्। त्यसो भए, स्क्रिनमा तपाईले यो सन्देश प्राप्त गर्नु हुनेछ प्रश्नमा सामग्री उपलब्ध छैन। यो सामान्यतया स्पष्ट संकेत हो कि कसैले तपाईंलाई सामाजिक नेटवर्कमा ब्लक गरेको छ।
गुगललाई चेकको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्
एक विधि जुन धेरै नै प्रभावकारी छ, दुबै केसहरूमा, चाहे ऊ तपाईंको साथी हो वा होइन, गुगल प्रयोग गर्नु हो। पहिलो काम भनेको फेसबुकबाट लग आउट गर्नु हो। त्यसो भए तपाईंको ब्राउजरमा नयाँ विन्डो खोल्नुहोस् र यस व्यक्तिको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईं खोजी गर्न चाहानुहुन्छ, र नाम पछि फेसबुक राख्नुहोस्, ताकि यो देखाइने छ कि यदि यस व्यक्तिको सामाजिक नेटवर्कमा प्रोफाइल छ। इन्टर हिट गर्नुहोस् र खोजी परिणामहरू प्रदर्शन हुनेछ।
यदि तपाईंले त्यो व्यक्तिलाई देख्नु भयो भने सामाजिक नेटवर्कमा प्रोफाइल छ र तपाईं यसलाई प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ, केहि कुरा थालिएको सत्रको साथ सम्भव थिएन, त्यसोभए तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ कि यस व्यक्तिले तपाईलाई फेसबुकमा ब्लक गरेको थियो। योसँग परामर्श लिनको लागि यो एक धेरै प्रभावी चाल हो, र यसले तपाईंको श doubts्कालाई हटाउनेछ, यदि तपाईंलाई अझै पक्का पक्का हुनु आवश्यक छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सामाजिक नेटवर्क » मलाई कसरी फेसबुकमा ब्लक गरिएको छ भनेर कसरी थाहा पाउने?
भोडाफोन टिभी सामसु'sको स्मार्ट टिभीमा आउँदछ, यसलाई कसरी स्थापना गर्ने